Rooder Technology Limited ku yaalaan Shenzhen. Waxaannu ku dadaaleynaa in la dhiso ilaa brand ee TOP ee mootooyinka korontada ee Shiinaha. Iyada oo dhowr sano ah ee horumarinta, waxaan ayaa si fiican u yaqaan labada gudaha iyo dibada. kooxda xirfadeed Our waa qof ku taqasustay mootooyinka is miisaamid, hoverboards iyo rullebrett design, wax soo saarka, suuq-geynta iyo adeeg. Waxaan Nagi si ay u bixiyaan qalabka fiican gaadiidka-masaafada gaaban dad by hoggaansanaayeen masuuliyadda bulshada ee keydinta tamarta, carbon hoose iyo ilaalinta deegaanka.
Shirkadda Our heysta tirada xuquuqda hantida aqooneed ee madax bannaan iyo technology muhiimka ah. Iyada oo ujeedadu tahay horumarinta of keydinta tamarta, ilaalinta deegaanka, waxaan helay shahaadada CE, FCC, RoHS oo si adag u eekaan nidaamka maareynta ISO9001 ah. Iyada oo sano koraya, waxaannu ku bilaabay Rooder dhowr mootooyinka daydo cusub.
Our mootooyinka / hoverboards / stakeboards waxaa lagu iibin in ay adduunka oo dhan oo si ballaaran loo isticmaalo in baabuurta shakhsiga ah, booliska on waajib, sidday metro, garoonka diyaaradaha iyo taambuug weyn, dhibco muuqaal dabiici ah iyo koorsooyin golf, iwm
Shirkadda Our dooda fikrad ganacsi cabsi dabeecadda, annaguna waannu rumaysan in sayniska badala nolosha in la dhiso design dhamaystiran iyo R & D nidaamka alaabta isboortiga dibada smart iyo baabuurta shakhsiga ah. Waxaan leenahay kooxda ugu xirfad iyo khibrad design duurka, iyo waxaan sidoo kale technology muhiim madax banaan patent, qalabka baaritaanka sare oo saldhig saarka kaas oo hubinaya in wax soo saarka kaamil ah. Our R & D madax banaan awood ayaa lagu aadka u qirtay by warshadaha, oo waannu ayaa si fiican u yaqaan oo la midnimada ganacsi farsmada heerka sare ah.
By qaadashada style ka shaqeeya ee si dhab ah, hufan, isku hallayn, daahirinteeda, isagoo sheegay, waxaan si joogto ah loo horumariyo tayada badeecada iyo adeegga, si ay u qanciso macaamiisheena.
Aragtidayadu waa in ay Samee Life More raaxo ah, debecsan iyo Healthy.